Maererano ne Chinese State Council mukuru musangano musi waApril, 7, 2020, vachipesana nemamiriro epasi rose epasirese, musangano wakasarudza, iyo yechi128 Canton Fair inoitwa online mukatikati kusvika pakupera kwaJune kukoka izvo zviratidze online zvigadzirwa kumba nekune dzimwe nyika, uchishandisa ruzivo rwemhando yepamusoro, kupa maawa makumi maviri nemana online kurudziro yekutengesa mabasa seyokurukurirano yepamhepo, inoita kuti zvinhu zvepamusoro-soro zvigadzirwa zvekutengesa online, ita mirairo kubva vanamuzvinabhizimusi vekunze uye vekunze havatombosiya imba kuti vaite bhizinesi.
Masikati emusi waKubvumbi 23, gurukota rezvekutengeserana rakaita musangano wenguva dzose wepanhau, mutevedzeri wemukuru weofficial office ye Ministry of commerce media mutauriri gao feng vakapindura vatori venhau pamusangano wevatori venhau nezvepamhepo. Canton Fair yakatemwa yakatarwa nguva, yekugadzirira basa nguva yakasimba, kufambira mberi sei pakuratidzira nekusimudzirwa kwevatengi?
Zvinoenderana nehunhu hwe iyo yechi128 Canton Fair inochengetwa paInternet, isu tatanga basa rekukwezva mari uye kuratidzira. Parizvino, runyararo rwuri kufambira mberi mushe, neziso rekufukidzira nyika yese, uye mapepa ekukoka atumirwa kune vanopfuura zviuru mazana mana ezvevatengi vekunze vakapinda mumusangano. Canton zvakanaka , senge masangano makuru epasi rese emabhizimusi nekutengeserana, mabhizinesi anotenga nyika zhinji, nezvimwewo kuburikidza nematanho akasiyana siyana, shingairira kukoka varume vasina kugona kuenda Canton Fair munguva yakapfuura nekuda kwenguva kana zvimwe zvinhu, zvakaita semutengo wekufamba haugone kuve pamusangano, kuedza kukwezva vatengi vekunze vanopinda, tora mirairo yakasimbiswa misika inogadzira mamiriro akanaka emabhizinesi. Zvichakadaro, isu tinowedzera kusimba kwevanokoka mudzimba kukoka, kuwedzera huwandu hwevatengi vehunyanzvi kukoka, kushingairira kuwedzera kunze, kuchinjirwa kusimudzira mabhizinesi ekunze ekutengesa.
Panyaya yekutarisa panguva, B2B kuratidzwa kwakakosha basa nekufambisa nguva pfupi kuratidza ruzivo rwekusangana, zviwanikwa zvakazara, sanganisa, Canton Fair inoitwa muindaneti kubatsira mabhizinesi anotora musika achachengetedzawo zvaionekwa uye zvakanakira, makumi ezviuru zvevatengi uye varatidzi mukati memazuva gumi pakakwirira mafuratidziro ekuchinjana achinyatsopindirana, zvese izvi zvakanakira kumutengi kamwe-kumira shopu, zvinogona zvakare kubatsira zano rekutengesa, vatengi vakafambidzana vanoda kuunganidzwa kwemashoko, mativi ese anogona kunge anoenderana neyaka kana kupfuura mwaka wenguva yekutenga kana kugadzira uye chirongwa chekushandisa. Kubva pamaonero evarongi vekuratidzira, kubata kuratidzira mukati menguva shoma inokodzera kukoka vatengi vepasi rese kutora chikamu mukuratidzira, kuwedzera kutarisisa, kuwedzera kufukidza kwekutaurirana, uye kuunza mikana yakawanda yebhizinesi yekutaurirana uye kushandira pamwe kune varatidziri.
Mwaka uno Canton Fair inosimbisa mutambo weinternet, kupa ruzivo rwekumashure kwemapato ese, nekuteedzera kutenderera kwenhaurirano yekutenderana pakati pemapato maviri. Ipa yakawandisa mitauro yekushandura rutsigiro rwechikuva docking kufambisa kutaurirana pakati pevatengi nevanoratidzira. Kune yega yega yea varatidziridzi yekumisikidza yepamhepo-yemaawa 24 nhepfenyuro mukamuri, iwe haugone kutarisana nekutarisana kutaurirana, zvakare inogona kutakura pachena.